अन्तिममा आफ्नै बुवाले चिनेनन् आदर्श मिश्रलाई ! - Purbeli News
अन्तिममा आफ्नै बुवाले चिनेनन् आदर्श मिश्रलाई !
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८ समय: १५:३९:१३
इटहरी / यतिबेला कोरोनाले देशमा हरेक दिन सयौको ज्यान लिइरहेको छ । जसको मारमा केही कलकार पनि परेका छन् । कसैले कोरोना जिते, कसैले हारे भने कसैले लडिरहेका छन् । यता कमेडियन आदर्श मिश्राको बुवा भने सरकारको नितिनियम र हस्पिटलको लापरबाहीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । जुन कुरा आदर्श आफैले भनिरहेका छन । उनले आफ्नो बुवाको दाहसंस्कार गरेपछि आज एउटा भिडियो आफ्नो युट्युब च्यानलमा सार्बजनिक गरेका छन् ।
उनले “बाबा हुनुहुन्न अब । मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पूरै जिम्मेवार चाहिँ नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु । किनभने दुई हप्ता अगाडि बाबालाई डायलासिसमा लैजाँदा एचपीओ टू छ भनेर यहाँ डायलासिस हुँदैन भनेर एनएमसीबाट निकालिदिएको हो । चार वर्ष बाबाले एनएमसीमा डायलासिस गराउनु भएको हो । प्रति डायलासिसको सरकारले ३५ सय दिन्छ । कमाउने बेलामा तिमीहरु कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेलामा धपाइदिने । अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरु केही पनि राम्रो छैन ।” भन्दै बुवा उपचार गरेको हस्पिटलप्रती आक्रोश पोखेका छन् ।
भिडियोमा आदर्शले “एनएमसीको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ नेफ्रो प्लसले जुन इन्डियन कम्पनी हो । अनि इन्डियाको एक नागरिक जो नेपालमा कार्यरत छ त्यसले डिसाइड गर्न पाउँदैन – कसको डायलासिस हुन्छ कसको हुँदैन भन्ने । को बाँच्छ र को बाँच्दैन भन्ने डिसाइड इन्डियाबाट यहाँ आएर कार्यरत गर्ने व्यक्तिले गर्न पाउँदैन । इन्डियाको मानिस यहाँ आएर तलब खाने हो, नेपालको पेसेन्टलाई हप्काउने होइन । हाम्रो लाइफ त्यसको हातमा छैन ।
कमिसनका लागि एउटा डाइलोजरले १२ वटासम्म डायलासिस गरेका छन् मेरो बाबाको । आठ, नौ वटा त मिनिमम छ । मसँग छ सबै लिस्ट । गत वर्ष नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदाखेरी त्यहाँका पेसेन्टहरुलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरेको थियो । एक महिनामा ५ जना मानिस मरेका थिए – डायलेजर नफेरेर । नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउन अति धाँधली गरिरहेको छ त्यहाँ ।” भनेका छन् । १० मिनेट लामो भिडियोले यतिबेला भाईरलको रुप लिदैछ । युट्युबमा उनले आफ्नै नामको च्यानलबाट सार्बजनिक गरेका छ ।